FBC - Ityoophiyaa fi Keeniyaan yaa’ii Beejiingirratti hirmaachufi
Ityoophiyaa fi Keeniyaan yaa’ii Beejiingirratti hirmaachufi
Finfinnee, Ebila 13,2009(FBC) –Yaa’ii waltumsa misoomaa fi diinagdee idil addunyaa Beejiingirratti Ityoophiyaa fi Keeniyaa dabalatee biyyoonni 28 kan hirmaatan akka ta’e Ministeerri Dhimma Alaa Chaayinaa ibse.
Yaa’icharratti barreessaan olaanaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Antooniyoo Guutereez, preezdaantiin Baankii Addunyaa Jiim Yoong Kiimii fi daayreektarri Fandiin Maallaqa Idil Addunyaa Kriistiyaan Leegaardeen ni argamu jedhameera.
Waliigalaan hayyoonni 1,200, qondaaltonni mootummaa biyyoota addaddaa fi gaazexeessitoonni 110, akkasumas hirmaattonni dhaabbilee idil addunyaa addaddaa bakka bu’an 61 ni argamu jedhameera.
Waltajjiin kunis Caamsaa 6 fi 7,2009 proojaktiin “siilk eend rood” preezdaantii biyyattii Zhii Jiin Piingin ega ifoomen booda yaa’ii guddaa gaggeeffamuu.
Yaa’ii kanarratti guddina diinagdee addunyaa kana caalaa dabaluu fi gufuulee mudatan hiikuuf akkasumas keessaa ba’umsa isaaf malli kan kaa’amu ta’a jedhameera.
Yaa’ii kanarratti Chaayinaan waliigalteewwan addaddaa biyyoota 20 waliin kan mallatteessistu yammuu ta’u, dhaabbileen idil addunyaa 20 ol ta’anis carraalee hojii biyyattii waliin hojjechuu danda’an adda ni baafatu jedhameet eegama.
Waliigalteewwan mallatteeffamanis ijaarsa bu’uuraalee misoomaa, indaastirii, invastimantii, diinagdee, daldala, anniisaa fi qabeenya uumamaa, maallaqaa fi waljijjiirraa aadaa akka ta’an eerameera.
Oduuwwan Biroo « Maqaa invastimantiitin qaxxaamuraan duroomuuf kan socho’an irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira- Preezdaant Lammaa	Warshaa simmintoo Birrii biliyoona 7.5 ijaaramuuf dhagaan bu’uuraa kaa’ame »